Malunga • Dixie Orange County Hotel
Malunga Dixie Orange County
kwakhona ngokukhawuleza kwi
The Dixie Brand ke walihlahlisa ngoodade ababini ukuya wesithathu, Dixie, yashwankathelwa ngokukhawuleza kakhulu ngumqhubi onxilileyo ubomi bakhe. Ukukhangela utyhile embi ibe ezintle, oodade ababini lokusinda udale kwihotele egameni ukuba iqulethe undoqo ngubani Dixie yaba ... abathobekileyo, i'St, ayile, besazi nokusingqongileyo, nemfesane, nokuba zihlale njalo kakhulu.
Ngale inkuthazo nokhokelo, ngolokuqala Dixie Hotel Brand yaphuhliswa entliziyweni Hollywood. Yinto imoto inn sizama kunye ngohlangothi i'St. Njengendawo enamanzi kunye kuxokozela Hollywood Boulevard, otyelwe lushly amasundu zinokuhonjiswa nezimo kubalaseleyo ezinye icon inkulu Hollywood, kwaye kananjalo indawo ethandwayo zokufota nefoto Namagatya.
Ngenxa yokuphumelela okuqhubekayo kunye nomsebenzi onzima wonk 'ubani obenegalelo, sizisa kuwe indalo yethu yesibini, iDixie Orange County! Ihotele yesimanje yesimanje eneempembelelo ezivela kuyo.
Lebrendi ngesazela, hayi kuphela musa abanini kuthatha indlela epheleleyo kulawulo umsebenzi, kodwa zonke zokuhlamba kunye-gumbi eziluncedo ziqokelelwe, ukucocwa, erisayikilishiweyo, kwaye luthunyelwa zokufihla lwasekhaya bengenamakhaya yaye kumazwe asaphuhlayo. amashiti Ngobunono kunxitywa ngesipho ukuba ubundlobongela basekhaya lendawo yokuhlala kunye amashiti kakhulu kunxitywa ngesipho ukuba okugcina izilwanyana basekuhlaleni. Thina ukubandakanya izinto nokusingqongileyo lonke nezisoloko sizama ukucutha imizila yekhabhoni lethu - kuquka wokusebenza ofisi olungenamakhwiniba 80% lweziko engasebenzisi itshekhi-kwi / kukuya ku- phandle. Inxalenye yengeniso ehotele ukuba zixhaswe ukuze uncede ukukhuthaza ulwazi banxila ukuqhuba ngokusebenzisa imibutho efana MADD (Oomama Against abanxilileyo Driving) kunye nabanye, kunye nolawulo ihotele ikhuthaza iindwendwe ekusenokwenzeka ukuba amqumbele isuntswana kakhulu ukubabiza ukuba amalungiselelo iteksi imbuyekezo xa kuthelekiswa sizibandakanye ivili ngokwabo.
Kwaye ke kule hotele 38-igumbi limi embindini phakathi zonke ezinika ishushu kumazantsi California ngayo, wamkela iindwendwe abafuna into eyodwa - ngamava star ezintlanu-ngexabiso star ezintathu-i!